Dheemanka Mashiinka Dheeminta, Dheemanka CBN, Goobaha Mashiinka CNC- Jinyunxiang
giraangiraha qumbaha dheeman loogu talagalay soo saaridda carbide carbideedka
Dheemanka dheeman iyo CBN oo loogu talagalay goynta alwaaxyada
giraangirta garaacidda dheeman loogu talagalay qalabka carbide
dheeman iyo CBN shiidi karaya biraha birta-biraha ah ayaa arkay kaarar
Mashiinka gacanta dheeman dheeman
Mashiinka wax shiidi kara ee dibada ah giraangiraha dheeman
WAA INAAN BIXINNAA SIYAASADDA SARE
Gawaarida isku-shiidan ee meeraysan ee loogu talagalay qalabka CNC HSS fl ...
Astaamaha: 1. Xasaasiyad heer sare ah, way fududahay dib u dejinta iyo dib u dejinta inta lagu gudajiro isticmaalka aan loo baahnayn 2. Waxay xaqiijineysaa saxsanaanta dhameystirka weyn ee dusha sare. 3. Qaybta shaqada lama gubi doono. 4. giraangiraha ayaa ka shaqeyn kara dhowr qaab oo kaladuwan. Dheemankayaga xariga dhejiska leh iyo giraangiraha CBN waa la heli karaa oo fidsan, koob qaabeysan, miis weel leh, iyo qaab dhululubo leh. Waxyaabahan soo gaabinta ah ee iskuxiran ayaa loo isticmaali karaa in lagu jarjaro jarjarida alaabada kaladuwan, qeybaha gunta, goynta wareega iyo galaaska, dhamaadka shiidi f ...
Shiidida Gawaarida Naafada ee xarumaha CNC Mashiinnada
MACLUUMAADKA SAACADAHA Waxqabadka sare ku shiidid qulqulka khadka waxsoosaarka. Faahfaahinta cusub ayaa muujineysa xoog xoog u shiidid aad u hooseeya iyo saamiyada ugu badan ee ka saarista saamiyada oo leh xirmo kooban Qalabka shiidan wuxuu dammaanad qaadayaa ugu badnaan qalabkaaga iyo dhammaystirka ugu fiican ee dusha sare. Tani waxay dhammaantood hoos ugu dhaceysaa tayada dheemanka dheellitirka leh。 Codsi duulaya shiidida qalabka TC iyo qalabka HSS goynta waxqabadka Sare ee shiididda qalabka tungsten carbide ee qalabka birta liidata 1. Isku darka pr ...
giraangiro shiidi karaya
Garabka wareegsan dheemanka dheemanka waxaa si balaadhan looga isticmaalaa shiididda xididdada ku samaysan xabbadda carbide. Ilka gooshadu way siman tahay, oo way af badan tahay oo cimri dheer bay leedahay. Kireynta xarig dheeman dheellitiran waxaa loo isticmaalaa sameynta shaashadda muuqaalka halkii laga isticmaali lahaa goynta dhaqameed bilaashka ah. Waxay hagaajin kartaa hufnaanta socodsiinta shaashadda muuqaalka iyo tayada dusha sare, waxayna yareyn kartaa qiimaha. Waxay leedahay qaddarka alaabta ka sareysa iyo xuubka dusha sare. Resin wareejin dheeman waa ...
dheeman dheelitirida dheeman loogu talagalay TCT carbide wuxuu arkay bla ...
Ugu badnaan loo isticmaalo wajiga wax lagu shiido ee mashiinka CNC ee loo yaqaan 'TCT' kaadi muruqyada, dheemanka dheemanka dheellitirida ee fiiqida carbide-ka ka muuqda biraha, garaacidda dheeman dheelitirka qalabka carbide-ka, sida Vollmer, Abm, Rekord..Grit way ku kala duwan yihiin codsi ahaan. Waxba kuma xirna sameynta harooyin cusub (Saw Blade for Processing Plate) Bla Saw Blade For Solid Wood ， Saw Blade For Aluminum ， Saw Blade For Special) ama dib u soo nooleyn, alaabadayada si wanaagsan ayaa loo qaataa. Waxaa jira sedex qaybood oo u baahan in ilkaha salka loogu dhigo ...
dheeman iyo cbn shiidi karo Carbide R ...
Codsiyada isku xirka biraha garaacida garabka Resin giraantiinada dheeman waxaa loo isticmaalaa qalabyada carbide tungsten, galaaska gawaarida, PDC, PCD, PCBN, dhoobada, safayr, galaaska indhaha, iyo qalabka magnetic. Resin bond diamond alwaax shiidi waxay leedahay xoogaa shiidid yar, kuleylka yar oo shiidi, is-hagaajinta wanaagsan, hufnaanta sare, iyo dhameystirka dusha sare. Waxaa badanaa loo istcimaa goynta, shiidida, shiidi, iyo nadiifinta. Waxaa si aad ah loogu isticmaalay in lagu farsameeyo ceelka qaaliga ah ...
Qalabka Alwaaxyada, Dheemanta iyo CBN oo Jaridda W ...
Gawaarida loogu talagalay jarista alwaaxyada Isku-dhafka matrixdu waxay hubin kartaa labadaba adkeyn iyo nuugista shooga Inta badan waxaa loo isticmaalaa shiididda jarista alwaaxyada. Qalabka shiidan ee Shiineeysku wuxuu caan ku yahay macaamiisha guriga iyo dibedaba qiimahoodu aad u sarreeyo iyo tartan .Grit waa ku kala duwan yihiin dalabka. Dheefshiidka Qalabka Kubadda Dheemanka ee Dheemanka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Goobaha Kariimka ee Loo Yaqaan Carbide Iron Is-fiiqista wanaagsan, kuleylka kuleylka yar, si fudud u furfurnaan, ...
Garaaca dheeman dheelitirka ee carbide / Round Edge D ...
Dheemanku waa shayga ugu adag adduunka. Adkeynteeda, xirashada iyo iska caabbinta heerkulka ayaa dheemanta ka dhigaysa tan ugu habboon ee lagu baabi'inayo qalabaynta sida: * Matel adag * Tungsten Carbide * Alaabada seeraha ah * Alaabada Magnetic * Qalabka silikonnada * Qalabka kuleylka leh ee lagu buufiyo * Qalabka polycrystalline dheeman iyo bustaha CBN : Resin bond garaacidda dheeman birta Fiitimay / giraan alwaax shiidi kara Markaad sameyso ...
Mashiinka qadiiminta ee dhexdhexaadka ah ee dhexdhexaadka ah ...
Qalabka noocan ah ee wax lagu shiidi karo wuxuu ku habboon yahay isticmaalka mashiinka mashiinka wax lagu shiro ee semi-otomatik, ku habboon warshadaha guryaha ama soo-saareyaasha ku takhasusay ka-shaqeynta bannaanka ee biraha aluminiinka. Gawaarida dheemanka leh ee 'Bakelite Body wheel' oo leh bakelite jirka oo leh bahalnimo wanaagsan, waxaa loo adeegsaday warshadaha alwaaxyada, goynta bilaashka ah iyo cimri dheel dheel dheel dheel dheel dheel dheel ah oo loo yaqaan 'Bakelite body for' sillindyl cylindrical, elasticity, sharpness and right 4 inch dhexroor cuuryaamiyey zed 5 inji dheeman cu ...
Shijiazhuang Jinyunxiang Teknolojiyada Co., Ltd. waxay ku takhasustay resin-bond iyo giraanno shey adag oo adag iyo giraangiraha shiidi kara CBN. In ka badan toban sano oo horumar ah, waxaan noqonay hogaamiyaha soo saaraha shiidi curyaanka. Alaabada ayaa si balaadhan looga isticmaalaa khadadka wax soo saarka boqolaal shirkadood oo gudaha iyo dibeddaba ah. Iyada oo ku saleysan maaraynta daacadnimada, dhawrista iimaanka, saxsanaanta, daa'imka, waxaan jeclaan lahayn inaan soo bandhigno alaabada ugu hufan, joogta ah, iyo badeecadaha u qalma.
Giraangiraha dheemanta lagu dhejiyo waxaa lagu kala saaraa dhoobada, alwaaxyada, birta birta, korantada, biraha, iwm.
1. Kariin goos goos goos goosad ah: is-muujinta wanaagsan, ma fududa in la xannibo, dabacsanaan, iyo nadaafad wanaagsan, laakiin bakhtigu wuxuu leeyahay awood xumo, xajmiga dheemanka oo xun, xaragada kuleylka liita iyo xirashada iska caabbinta, sidaa darteed ma ahan ku habboon giraanbarada qunyar socodka ah, kuma haboona waajibaadka culus ...
Xarig shiidi weel gooye ah
Shiidi karinta xaruntu waa nidaamka OD (dhexroor dibedda ah). Taayirada xarunteedu shiidan tahay waxaa loo adeegsadaa qulqulka durugsan ee meheradaha. Nooca: 1A1, 6A1, 9A1 Codsi: Baararka carbide-la-sumeeyay, Polycrystallin 1.Product Magaca ： Dhego-gooye Xarun-goos goos-gooyn, Ior-gooye dheellitir dheellitir leh, Resin Diamo ...
Codsiyada kala duwan ee giraanjarka
Dheemanka dheeman / CBN ee loogu talagalay 'CNC Grinder Resin bond', dheeman tayo sare leh, tikniyoolajiyad gaar ah, oo loo adeegsaday 5-axis CNC grinders for grind of tungsten carbide or HSS alloy steel steel Diamond / CBN Wheel for Profile Shiidi Profile dheeman iyo giraangiraha CBN ee qalabka kala duwan sida stey adag ...
Qalabka shiidi: Cabbirka: 100 * 20 * 16100 * 30 * 16 Waxyaabaha: Cilmiga CBN wuxuu arkay qulqulaya ka dib markii lagu qalabeeyay giraangiraha shiidan ee ay soo saartey shirkadda, waxay gaari kartaa saxsan sare. Sidaa darteed, ka dib gooynta, xaashida warqaddu waa ka madax bannaan tahay cidhifyada xunxun, nabarrada iyo ifafaalaha madow. waxay keenaan kaadiheysta waxyaabaha soo socda ...
Saw qaniinyo shiidan
Iyada oo ay caan ku tahay mashiinnada wax lagu arko ee kala duwan, tayada qoryaha ayaa si toos ah u saameeya hufnaanta howsha iyo qiimaha wax soo saarka ee soo saarista. Inta lagu gudajiray isticmaalida qulqulka, tayada qodida waxay mar kale saameyn ku yeelan doontaa tayada qoryaha. Muhiimaddeeda waa is-muujin. Ugu p ...
No. 115, Tabei Road, Yuhua Distrcit, Shijiazhuang City, Hebei Gobolka
Gawaarida Cagaaran ee Loogu Talagalay Carbide, Dheemanka / Cbn Clearance Angle Grinding Wheel For Qalabka Miisaaniyada, Shiidida Gawaarida Qalabka Carbide, Carbide Circle Saw wuxuu u egyahay jaridda Birta, 5inch Resin Bixinta Boondada Birta ee Qalabka Carbide Qalabka steel Disc, Dheeman dheellitir dheeman loogu talagalay Tungsten Carbide,